Purchase any membership at FORZA Fitness Studio & choose from a range of options
Experience a workout at FORZA Fitness Studio by booking your first trial session
Thursday : 8:00 AM-9:00 AM
Other Gyms in Rajendra Nagar
₹ 18000₹ 14160(EMI options available)
₹ 27000₹ 21830(EMI options available)
₹ 54000₹ 29500(EMI options available)
All above rates are applicable to new members only. If you are looking to renew your membership at FORZA Fitness Studio share your details & we'll help you with the best offer.
Renewal request for FORZA Fitness Studio
We have received your request for renewal at FORZA Fitness Studio, our team is working to get you the best rate.
Online booking for FORZA Fitness Studio is not available currently
All(9)Studio Membership(6)Yoga(5)Dance Mix(1) Zumba(1)
Hold on! Do you want to book one free session at FORZA Fitness Studio?
Workout at FORZA Fitness Studio by buying a membership or booking a session & get rewarded in 3 easy steps
Check-in at FORZA Fitness Studio by scanning the QR code through the app